Yeremia 17 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yuda bɔne adidi ne mu (1-4)
Yehowa mu ahotoso mu nhyira (5-8)
Koma yɛ ɔdaadaafo 9-11)
Yehowa ne Israel anidaso (12, 13)
Yeremia mpaebɔ (14-18)
Montew Homeda ho (19-27)
17 “Wɔde dade kyerɛwdua akyerɛw Yuda bɔne no ato hɔ. Wɔde dɛnkyɛmmo kyerɛwdua akyerɛw* agu wɔn koma pon soNe wɔn afɔremuka mmɛn ho. 2 Wɔn mma mpo kae wɔn afɔremuka ne wɔn abosonnua*+A ɛwɔ dua kusuu ase ne nkoko atenten so,+ 3 Ne mmepɔw a ɛwɔ wuram so no. Mɛma nkurɔfo afom w’ahode ne w’agyapade nyinaa.+Yiw, wo sorɔnsorɔmmea* nso wɔbɛfom, esiane bɔne a akɔ so wɔ wo nsaase nyinaa so nti.+ 4 W’agyapade a mede maa wo no, wo ara wobɛma afi wo nsa.+ Na mɛma woasom w’atamfo wɔ asaase a wunnim so so,+Efisɛ moama me bo afuw te sɛ ogya a wɔasɔ.*+ Ɛbɛdɛw afebɔɔ.” 5 Nea Yehowa aka ni: “Nnome nka ɔbarima* a ɔde ne ho to onipa dasani so,+Nea ɔde ne ho to nnipa ahoɔden so,*+Na ne koma aman afi Yehowa ho. 6 Ɔbɛyɛ sɛ dua koro a esi sare so. Sɛ bere pa ba a, ɔrenhu,Mmom ɔbɛtena sare so asaase wosee so,Ne nkyene asaase a obiara ntumi ntena so so. 7 Nhyira ne ɔbarima* a ɔde ne ho to Yehowa so,Na ɔde ne werɛ hyɛ Yehowa mu.+ 8 Ɔbɛyɛ sɛ dua a wɔadua wɔ nsu nkyɛn,A ne ntini tenetene kɔ nsu no ho. Sɛ ɔhyew ba a, ɔrenhu,Na n’ahaban bɛyɛ frɔmfrɔm daa.+ Afe a ɔpɛ besi nso, ɔrensuro,Na ɔrennyae abasow da. 9 Koma yɛ ɔdaadaafo* sen biribiara, na ne ho yɛ ahometew.*+ Hena na obetumi ahu nea ɛwɔ mu? 10 Me, Yehowa, me na mehwehwɛ koma mu,+Na mepɛɛpɛɛ onipa tirim adwene* mu,Sɛnea ɛbɛyɛ a metua obiara ka sɛnea n’akwanNe ne nnwuma te.+ 11 Nea ɔfa ɔkwammɔne so nya ne ho no,*+Ɔte sɛ akokɔhwerew a ɔboaboa nkosua a ɛnyɛ ɔno na ɔtowee ano. Ebefi ne nsa wɔ ne nkwa nna mfinimfini,Na awiei no, obiara behu sɛ ɔyɛ ɔkwasea.” 12 Anuonyam ahengua a wɔama so fi mfiase;Ɛno na ɛyɛ yɛn tenabea kronkron.+ 13 O Yehowa, Israel anidaso,Wɔn a wogyaw wo hɔ nyinaa ani bewu. Wɔn a wɔwae fi wo ho* no, wɔbɛyɛ sɛ biribi a wɔakyerɛw wɔ mfuturu mu,+Efisɛ Yehowa a ɔyɛ nkwa nsuti no, wɔagyaw no hɔ.+ 14 O Yehowa, sa me yare, na me ho bɛtɔ me. Gye me, na menya nkwa,+Efisɛ wo na miyi wo ayɛ. 15 Hwɛ! Ebinom ka kyerɛ me sɛ: “Ɛhe na Yehowa asɛm no wɔ?+ Ma ɛmmra ɛ!” 16 Nanso me de, mansan amfi w’akyi; mekɔɔ so dii w’akyi sɛ oguanhwɛfo,Na manhwɛ amanehunu da nso kwan. Nea m’ano aka nyinaa wunim no yiye;Mekaa ne nyinaa wɔ w’anim! 17 Mma ehu nnka me. Wone me guankɔbea wɔ amanehunu da mu. 18 Ma wɔn a wɔtan m’ani no ani nwu,+Na me de, mma m’ani nnwu. Ma ehu nka wɔn,Na me de, mma ehu nnka me. Ma amanehunu da no mmra wɔn so,+Na yam wɔn na sɛe wɔn pasapasa.* 19 Nea Yehowa ka kyerɛɛ me ni: “Kɔ na kogyina ɔmanfo ponkɛse a Yuda ahemfo fa mu kɔ ba no mu, ne Yerusalem kurow apon nyinaa mu.+ 20 Ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Muntie Yehowa asɛm, mo a mofa apon yi mu nyinaa: Yuda ahemfo ne Yudafo nyinaa ne Yerusalemfo nyinaa. 21 Nea Yehowa aka ni: “Monhwɛ mo ho* yiye, na monnsoa nneɛma biara Homeda, na mommfa mmfa Yerusalem kurow apon mu mmma mu.+ 22 Mommfa nneɛma biara mmpue mmfi mo fi Homeda, na monnyɛ adwuma biara nso.+ Montew Homeda no ho sɛnea meka kyerɛɛ mo agyanom sɛ wɔnyɛ no.+ 23 Nanso wɔantie, na wɔanyɛ aso. Wɔyɛɛ asoɔden;* wɔantie na wɔannye nteɛso.”’+ 24 “‘“Sɛ mutie me wɔ biribiara mu,” Yehowa asɛm ni, “na sɛ moamfa nneɛma biara amfa kurow yi apon mu Homeda, na motew Homeda no ho, na moanyɛ adwuma biara saa da no a,+ 25 ɛnde ahemfo ne adehye a wɔte Dawid ahengua so+ nso bɛtenatena nteaseɛnam mu ne apɔnkɔ so afa kurow yi apon mu, wɔne wɔn adehye, Yuda mmarima ne Yerusalemfo;+ na nnipa bɛtena kurow yi mu afebɔɔ. 26 Na nkurɔfo befi Yuda nkurow ne mmeae a ɛbemmɛn Yerusalem ne Benyamin asaase so+ ne mmepɔw ase+ ne mmepɔw so ne Negeb* aba. Wɔde ɔhyew afɔre+ ne afɔre ahorow+ ne aduan afɔre+ ne ɛhyɛ* ne aseda afɔre bɛba Yehowa fi.+ 27 “‘“Na sɛ moantie me antew Homeda no ho, na mosoa nneɛma na mode bɛfa Yerusalem kurow apon mu Homeda a, ɛnde me nso mede ogya bɛto n’apon mu, na ɛbɛhyew Yerusalem aban a ɛyɛ den no,+ na ɛrennum.”’”+
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Efisɛ wɔasɔ mo mu gya wɔ m’abufuw mu.”
^ Anaa “ɔbarima a ne ho yɛ den.”
^ Nt., “Nea ɔde ɔhonam ayɛ ne basa.”
^ Anaa “okontomponi.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wosa no yare a, ɛnyɛ yiye.”
^ Anaa “sɛnea onipa te nka wɔ ne mu.” Nt., “asaabo.”
^ Anaa “Nea onnya ne ho wɔ trenee so no.”
^ Nt., “Wɔn a wɔwae fi me ho,” kyerɛ sɛ, Yehowa ho.
^ Anaa “sɛe wɔn na sɛe wɔn bio.”